गाईवस्तुमा देखिएकोे नयाँ भाइरस देशब्यापी फैलिदै – Krisi Kranti
भेटेनरी डाक्टर भन्छन्– नेपालमा यसको औषधि उपलब्ध छैन
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विश्वब्यापी महामारी भइरहेकाबेला गाईवस्तुमा पनि नयाँ भाइरस देखा परेको छ ।
पूर्वी नेपालको झापा जिल्लाबाट गाईबस्तुमा देखापरेको यो भाइरस अहिले गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरु हुँदै देशब्यापी रुपमा नै देखा पर्न थालेको छ । कास्की, तनहुँ, नवलपरासीपूर्व तथा प्रदेश ३ को चितवनमा पनि गाईवस्तुमा नयाँ भाइरस देखा परेको छ ।
तनहुँको विभिन्न ठाउँका गाईवस्तुमा संक्रामक रोग देखापरेपछि काठमाडौ पठाई परीक्षण गर्दा ‘लम्पी स्क्रिन डिजिज’ नामको भाइरस देखा परेको भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र दमौलीका प्रमुख डा. बालकुमार श्रेष्ठले बताए । तनहुँको ब्यास नगरपालिका लगायत विभिन्न ठाउँमा देखिएको यो संक्रामक रोग अहिले नवपरासीपूर्वको जिल्लामा पनि फैलिएको श्रेष्ठले बताए ।
विज्ञकेन्द्रका प्रमुख डा. श्रेष्ठकाअनुसार लम्पी स्क्रिन डिजिज खासगरी अफ्रिकामा मात्रै सिमित हुने रोग हो । यो पछि यूरोपका देशहरु हुँदै संसारका विभिन्न देशहरुमा फैलियो । यो संक्रामक रोग सन् २०१२ मा मध्यपूर्वी यूरोप हुँदै एशियामा पनि प्रवेश गरेको श्रेष्ठले बताए ।
पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकाको वडा नम्बर १४ र १७ मा ब्यापक रुपमा संक्रमण फैलिएको कासोती नगरपालिकाका पशुशाखा प्रमुख डा.टेकराज पौडेलले बताए । संक्रामक रोग फैलिन नदिन नगरपालिकाले सूचना नै प्रकाशित गरी गाईबस्तु ओसारपसारमा रोक लगाएको छ ।
यो रोग लागिसकेपछि गाई भैंसीको दूध उत्पादन घट्दै जानुका साथै बाँझोपना हुने तथा गर्भरहेको गाईबस्तुको गर्भ तुहिने समस्या हुने ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा. श्रेष्ठ बताउँछन् ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, कालिका नगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका, राप्ती नगरपालिकालाई प्रदेश कार्यालयले पठाएको औषधि वितरण अभियान चलाएको छ । संक्रामक रोग फैलिन नदिन भन्दै ३ नम्बर प्रदेश कार्यालय हेटौडाले केही दिनअघि चितवनको भरतपुर महानगरपालिकालाई किटनाशक औषधि प्रदान गरेको थियो ।